DAAWO VIDEO: Boqolaal kenyaan Muqdisho Jooga oo Fariin Yaab leh U Diray Dalkooda Dhibta Xiriirka Xumaaday. - Banaadisom
Home Arimaha Bulshada DAAWO VIDEO: Boqolaal kenyaan Muqdisho Jooga oo Fariin Yaab leh U Diray...
Tan iyo markii Kenya iyo Soomaaliya Xiriirkooda Halkii Ugu Xumaa Gaadhey waxaa soo Baxaysa Dhibaatada Muwaadininta Ku Yeeshay,Gar Ahaan Kenya Ayaa Markii ugu Horeysey Dareemaysa Dhibaato Hore Loo Arag Taasi oo Ugu Weyn tahay Ganacsiga Qaadka,Balse waxaa Soo baxaysa Sida Muwaadininta Kenyaanka Ugu Noolaayeen Soomaaliya.
Boqolaal Hore aana loo Qiimayn Muwaadininta Kenya Ayaa Soo Baxaya oo Ganacsi iyo Shaqooyin kala Duwan ka haya Guud Ahaan Soomaaliya Wal walka Ay qabaan,Mudo Dheer waxaa loo Arkayey Inay Kenya Inay Muwaadinta Soomaaliyeed ee Jooga dalkeeda Uga aargoosato Dalka Soomaaliya Iyadoona Horay u Qiimayn Muwaadinta Kenyaanka Heerka Ay Saamaynta ku leeyahiin Soomaaliya.
Dabayaaqadii bishii Diseembar kulan ay yeesheen urur goboleedka IGAD, mas’uuliyiinta labada dal waxay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo xiriirkoodii diblomaasiyadeed . Laakiin shuruudda ay Soomaaliya ku dhaqaaqday waxay ahayd in ergo ka socota IGAD loo diro si ay u soo baaraan sheegashadeeda.
Xiisadaha ayaa soo shaacbaxay waana soo jireen. Waxay dhaawaceen muwaadiniinta caadiga ah ee qaybta ka ah xiriirka labada dhinac ee dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda.
Muqdisho maanta waa magaalo firfircoon dadaalkeeda dib u dhiskuna wuxuu soo jiitay kumanaan Kenyan ah. Bishii Diseembar 2020, in badan oo reer Kenya ah oo ka shaqeynayey Muqdisho waxay ku soo noqdeen dalkooda fasax iyagoo xilliganna diblumaasiyadda sii xumaatay .
Antony Wambua, waa madaxa barista dukaanka xarrago ee Safari Coffee, oo ah meelaha loogu jecel yahay fasallada dhexe ee Muqdisho. Wambua wuxuu leeyahay waxaan dareemayaa inuu u hadlayo kumanaanka reer Kenya ee ka faa’iideysanaya fursadaha cusub ee ka jira Soomaaliya.
“Haddii aan la talin lahaa madaxweynaheena, waxaan u sheegi lahaa inuu si deg deg ah u sameeyo qabanqaabada wadahadalada oo uu u xaliyo khilaafka u dhexeeya labadeena dal ,” ayuu yiri Wambua.
Waxaan ahaa nin cabsi badan, waxaan haystay fiiso sax ah inkasta oo aadan ogayn, dammaanad kamay ahayn in dib laygu soo celin doono. Waxaan si toos ah ugu xirmay TV-ga, daawashada wararka si aan u arko waxa dhici doona. Muqdisho waxay i siisay fursad waxaanan ka walwalayay inaan waayo shaqadan, ”ayuu yidhi.
Waxaa jira macallimiin badan oo Kenyan ah oo ka shaqeeya nidaamka waxbarashada Soomaaliya. Patrick Nguna waa mid ka mid ah wuxuuna ka shaqeeyaa iskuul gaar loo leeyahay.
“Khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya aniga shaqsiyan aniga ayuu saameyn igu yeeshay. Anigu waxaan ka shaqeeyaa macallin ahaan magaalada Muqdisho waana isha ay ku noolahay. Markii ay Soomaaliya ku dhawaaqday inay jareyso xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Kenya, wax walba waxay noqdeen wax aan la saadaalin karin, waxaanan si joogto ah uga walwalsanahay inaan waayo shaqadayda, ”ayuu yiri Nguna
Xawaaladaha ayaa qeyb muhiim ah ka qaata dhaqaalaha Kenya. Sanadkii 2020, xogta Bangiga Adduunka ayaa qiyaastay xawaaladaha qurbajoogta Kenya inay gaareen $ 2.9bn.
Vincent Thomas waa macallin kale oo Kenyan ah oo deggan Muqdisho. Wuxuu sheegay inuu sii joogayo inay indhaha u kala furtay rajada suuragalinaysa kumanaan Kenyan ah oo xirfad leh oo shaqo la’aan ku ah guryahooda.
Thomas wuxuu yiri: “ Kenya waa inay ogaataa inay u baahan tahay Soomaaliya . Tusaale waxaa u ah dhibaatada beeraleyda Miiraa . Kenya ayaa malaayiin doolar ka hesho qaadka ay u dhoofiso Soomaaliya. Hadda ganacsigaas waa la mamnuucay waxaanan ka baqayaa in Kenya ay lumiso wax badan oo dano kale ah, haddii aysan ka fiirsan siyaasaddeeda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. 6006c6b22095f